မြန်မာပြည်ကြီိး ငြိမ်းချမ်းဖို့ ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြပါစို့ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Buddhist monk uses racism and rumours to spread hatred in Burma
မန္တလေးညဈေးရှိ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှ မွတ်စလင်မ်မုန်းတီးရေးတရားအား ကျယ်လောင်စွာဖွင့် »
ကချင်၊ကယား၊ကရင်၊ချင်း၊မွန်၊ဗမာ၊ရခိုင်၊ရှမ်း ဟူ၍ လူမျိူးစုစုံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဤပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်ကြီိးသည် အရှေ့တောင်အာရှမှာ “Union of Burma” ဟူ၍ ၀င့်ကြွားခဲ့ရလောက်အောင်ကျော်ကြားထင်ရှားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က ရန်ကုန်မြို့တော်နှင့် စင်ကာပူကို နှိုင်းယဉ်ကြည့်လျင် (ရန်ကုန်မြို့ နှင့် ထောက်ကြံ့ မြို့နယ်လေး) ဖွံ့ဖြိုးမှုမျိူး ကွာဟလှပေမယ့် ယနေ့ ရန်ကုန် နှင့် စင်ကာပူ တိုးတက်မှုကို နှိုင်းယဉ်ကြည့်ရင် နှစ် 100 တိုးတက်မှုလောက် ကွာသွားပြီိ။
ပြီးခဲ့သည့် နှစ် 50 ကျော်အတွင်း လူနည်းစုတစ်စုလောက်ကသာ အမျက်ထုတ်ခဲ့ သောကြောင့် တိုင်းသူပြည်သားအားလုံး နှစ်နှာပြီိး တိုင်းပြည် ခောတ်နောက်ပြန်ဆွဲခဲ့ရသည်။
ဟော ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည် ဒီိမိုကရေစီိ စနစ်ခလေးနဲ့ နာလံထူကာစ ရှိသေး ထပ်မံ၍ wave of violence တွေ မြန်မာပြည်အနံ့ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ပြည်သူတွေအချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေဖြစ်၊ မငြိမ်သတ်မှုဖြစ်ပြီိး တိုင်းပြည် ခောတ်နောက်ပြန်ဆွဲပါက ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံသည် 3rd world country အဆင့်မှာပဲ ကြန့်ကြာနေမှာကို အထူးစိုးရိမ်မိသည်။
သို့ပါ၍ တိုင်းပြည်ပြန်လည်အေးချမ်းတည်ငြိမ်ဖို့၊ ပြည်သူတွေအကြားချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီိး ပျော်ရွှင်စွာ အတူတကွ ပြန်လည်နေထိုင်လာနိုင်ကြဖို့ ရည်ရွယ်ပြီိး ဤဘာသာပေါင်းစုံဆုတောင်းပွဲကို ၀ိုင်းဝန်းစီိစဉ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဘာသာပေါင်းစုံ ဆုတောင်းပွဲကြီးကို 13 ရက် ဧပြီိလ 2013 (စနေနေ့)တွင် Sydney မြို့၌ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီိး ဤအခမ်းအနားကြီိးသို့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ(ဘာသာစုံ)မှ
150 ဦိးကျော်ခန့် တက်ရောက်ကာ ဆရာတော်ကြီိး ဦိးဓမ္မစာရ (အသောက ကျောင်းတိုက် Oxley Park)၊ ဆရာတော် ဦိးနန္ဒိယ (သာသနာ့ ဒစ္စ ကျောင်းတိုက် Canleyvale)၊ ဆရာတော် ဦိးပီိညိတ်စာရ (ပဏ္ဌိတာရာမ ကျောင်းတိုက်)၊ Father Martin (U Mahn Aye Ngwe, Myanmar Catholic Church Group)၊ Father ဆရာ Shane (Myanmar Baptists Church Group)၊ ဆရာတော် Al Haj Harfeez Akbar (ဦိး ထွန်းထွန်းဦိး) တို့ အပြင် ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ဖေ (ဒေါ်ရွှေဇီိးဂွက်၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်/နာရေးကူညီိမှုအသင်း ဥက္ကဌ ဦိးကျော်သူ၏ ဇနီိး) လဲ တက်ရောက်၍ မေတ္တာဆုတောင်းခဲ့ကြသည်။
Thein Moe Win
Tags: Asia, Aung San Suu Kyi, Buddhism, Burma, Hajj, Muslim, Myanmar, Sydney
This entry was posted on April 19, 2013 at 4:43 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.